जन्डिस कुनै रोग होइन | Hamro Doctor News
सोमबार, १ कात्तिक २०७८ /
नर्भिकमा उपचाररत वैद्यलाई भेट्न पुगे प्रचण्ड
सेती अस्पतालमा एउटै शल्यक्रिया कक्ष,पालो कुर्छन बिरामी
सेती अस्पतालमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
सुदूरमा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य
‘वयस्कमा मात्रै होइन बालबालिकामा पनि हुन्छ एपेन्डिसाइटिस’ (भिडियोसहित)
जन्डिस कुनै रोग होइन
By प्रा.डा. सुधांशु केसी, कलेजो रोग विशेषज्ञ
जन्डिस भनेको आफैमा कुनै रोग होइन । यो त कुनै एक रोगको लक्षण मात्र हो । रगतमा विलिरुविन (कलेजोले निकाल्ने एकप्रकारको पहेँलो पदार्थ) को मात्रा बढी भएर आँखा, छाला र मुखभित्र पहेँलो हुनुलाई जण्डिस भन्ने गरिन्छ । थुप्रै रोग हरुमा लक्षणको रुपमा जण्डिस देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा जण्डिस भन्ने बित्तिकै रोग भनेर उपचार गर्न जाने चलन छ ।
साधारण अवस्थामा स्वस्थ व्यक्तिको रगतमा विलिरुबिनको मात्रा १ मिलिग्रामभन्दा कम हुन्छ । शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा ३ मिलिग्रामभन्दा बढी भएमामात्र आँखा, छाला र मुखभित्र पहेँलो देखिन्छ र त्यसलाई नै जण्डिस भनिन्छ ।
के कारण देखिन्छ जण्डिस ?
रगतको रातो कणको मृत्यु भएपछी शरीरमा विभिन्न प्रकृया पूरा भएपछि यसबाट बिलिरुविन निस्कन्छ र रगतमा जान्छ । रगतमा भएको बिलिरुविनलाई कलेजोको कोषहरुले पित्तथैलीमा फ्यालिदिन्छ । पित्तको थैलीबाट निक्लेको पित्तमा मिश्रित विलिरुविन पित्तको नली हुँदै सानो आन्द्रामा जान्छ । आन्द्राबाट फेरि सोसिएर ८० प्रतिशत जति पुनः रगतमा जान्छ । यसरी रगतमा विलिरुविन सधैँ रहिरहन्छ । कुनै कारणले यो मात्रा बढी भएमा यस अवस्थालाई जण्डिस भनिन्छ ।
शरीरमा कम्तिमा विलिरुविनको मात्रा ३ मिलिग्राम भन्दा बढि भएमा आँखा पहेंलो हुने गर्दछ । मैले अहिलेसम्म विलिरुविनको मात्रा ७६ मिलिग्रामसम्म भएको पाएको छु । त्यसैले शरीरको आँखा, छाला र मुखभित्र पहेँलो देखिएमा जण्डिसको उपचार गर्ने भन्दा पनि के कारणले जण्डिस देखियो भनेर परिक्षण गरी उपचार गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
विलिरुविन बढेर जण्डिस देखा पर्ने तीन विशेष अवस्थाहरु हुन्छन । पहिलो रगतको रक्त कोष अध्याधिक नष्ट भएर अत्याधिक विलिरुविन निस्केर कलेजोले त्यसलाई लिन नसक्नु ।, दोश्रो कलेजोको रोग लागेर रगतबाट विलिरुविन लिएर पित्तमा फ्याक्न नसक्नु र तेश्रो पित्तको नली कुनै कारणले अवरुद्ध भएर पित्त आन्द्रामा जान नसक्नु हो ।
जण्डिस कुनै रोगको लक्षण भएकोले यसले कुनै नवजात शिशुबाहेक अरुलाई असर गर्दैन । नवजात शिशुमा १० मि.ग्रा. भन्दा बढी विलिरुविन वढेमा रगत मार्फत मस्तिष्कमा पुगेर विभिन्न नशा सम्वन्धी समस्या सिर्जना गर्न सक्दछ । वयष्क मानिसमा विलिरुविन एक देखि १० मि.ग्रा. भए पनि पहेलो गराउने बाहेक यसले केही हानी गर्दैन । यस वाहेक विलिरुविनको कारणले शरिर चिलाउन सक्दछ । तर्सथ जण्डिस आफैले कुनै खास समस्या गर्दैन भने बुझ्न जरुरी छ । कुन कारणले जण्डिस भएको हो उक्त कारणले गर्दा हुने लक्षणहरु भने छुट्टा छुट्टै हुन्छ ।
बिभिन्न रोगअनुसार जण्डिस देखिने अवस्थाहरु फरक फरक हुन्छन् । जसअनुसार जण्डिसलाई बर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
बिशेषगरी रगतसम्बन्धि रोगहरुमा लक्षणको रुपमा देखिने जण्डिसलाई प्रि हेपाटिक अन्र्तगत राखिन्छ ।
शरिरमा अत्याधिक मात्रामा विलिरुविन उत्पादन भएर त्यसलाई कलेजोले पित्तथैलीमा फ्याल्न नसक्दा जण्डिस हुन सक्छ । यस किसिमको जण्डिसमा विलिरुविन घटबढ भइरहने र ५ मि.ग्रा. भन्दा बढी हुँदैन । रगतको रक्त कोष अध्याधिक मात्रामा नष्ट हुनु ,असामान्य अवस्थाको रक्त कोष वन्नु र शरिरको कुनै उँमा अत्याधिक रक्तश्राव पछि जमेको रगत विस्तारै शोसिदै जाने क्रम चाडंै हुन जान्छ भने त्यस अवस्थामा पनि जण्डिस हुन सक्दछ ।
बिशेषगरी कलेजो सम्बन्धि रोगहरुमा लक्षणको रुपमा देखिने जण्डिसलाई हिपाटिक अन्र्तगत राखिन्छ । कलेजोका रोग भन्नाले जन्मजात हुने कलेजोका रोग, एक्युट हिपाटाइटिस, क्रोनिक हिपाटाइटिस र कलेजोका क्यान्सर सम्बन्धि रोगहरु हुन् ।
३. पोष्ट हिपाटिक
कुनै कारणले पित्तथैलीको नली वन्द भएमा पित्त आन्द्रामा जान नसकेर रगतमा विलिरुविन बढन सक्छ । यस किसिमको जण्डिसलाई सर्जिकल जण्डिस पनि भनिन्छ । पित्त नलिमा ढुङ्गा हुनु, पित्तको नलिको क्यान्सर हुनु, प्यान्कृयाज्को क्यान्सर हुनु पोस्ट हिपाटिक जण्डिसका कारण हुन ।
जण्डिस रोग भनेर बिभिन्न भ्रम श्रीजना गरी उपचार गर्ने चलन एक दम बढि छ । यो बिरामी ठग्ने काम हो । भाइरल हेपाटाइटिस ए र बी को लक्षण शुरुमा जण्डिस देखिन्छ । खानमा अरुची हुने, वाक् वमकी लाग्ने र ७-८ दिनसम्म जण्डिस बढ्दै जाने र त्यसपछि आँफै घट्दै जाने हुन्छ । तर उपचारको नाममा आँफै ठिक हुने जण्डिसका लागी मानिसहरु बिभिन्न थरीका उपचार गर्दै हिंड्नु गलत हो ।
विरामीहरुले भनेका लक्षणहरुको आधारमा कुन किसिमको जण्डिस हो अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेक बिरामीका शरिरमा देखिने परिवर्तन हेरेर पनि कुन रोगका कारण जण्डिस देखियो भन्ने कारण ठम्याउन सजिलो हुन्छ ।
रगतको विभिन्न किसिमको जाँच गरेर जण्डिसको प्रकार र त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ । अल्ट्रासाउण्ड, (भिडियो एक्सरे) ले शल्य चिकित्साबाट उपचार गर्न पर्ने जण्डिस छुट्याउन सकिन्छ । अन्य जटिल अवस्थामा सिटि स्क्यान, एम. आर.सि.पी. आदिको मद्दत लिन पर्ने हुन सक्छ । कुनै अवस्थामा रोगको यकिन गर्न गाह्रो भएमा कलेजोको टुक्रा निकालेर बायोप्सी जाँच गर्नु पर्दछ । त्यसैले आँखा हेरेर र नाडि छामेर मात्र जण्डिसको उपचार गर्नु ठिक होइन ।
आर्युवेदिक उपचारका आम बुझाई
कुनैपनि रोगका लक्षण जण्डिस देखिएपछि आर्युवेदिक नगर्ने मानिस १० प्रतिशत भन्दा कम पाइन्छ । सवै किसिमको जण्डिसमा एउटै उपचार पद्धति गलत हो । कुनै जण्डिसको उपचार गर्नै नपर्ने हुन सक्दछ तर पनि त्यस अवस्थाको उपचार भईरहेको पाइन्छ । कतिपय जण्डिसका रोगीहरुलाई शल्य चिकित्सकको जरुरी हुने गर्दछ । त्यस अवस्थामा आर्युवेदिक संगसंगै एलोप्याथिक उपचारले बिरामीको अवस्था विग्रन सक्छ । र अन्त्यमा उपचार नहुने स्थिति पनि आउन सक्दछ ।
पहिले एक जमानामा एलियोप्याथिक उपचार पद्धति थिएन त्यसैले सबै रोगहरुको उपचार आर्युवेदिक पद्धतिबाटै गरीन्थ्यो । तर अहिले एलियोप्याथिक उपचार पद्धति आइसकेकोले पहिले रोग पत्ता लगाई सजिलै जण्डिस निराकरण गर्न सकिन्छ ।
Last modified on 2016-09-25 16:33:19
देशभर थप ६ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु, २४ घन्टामा ६ सय ८० जना स्वस्थ
Prof. Dr. Sudhamshu K.C
Kanti Path, Kathmandu Nepal
सिकलसेल बिरामीका लागि अस्पतालहरुमा डेस्क स्थापना गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय
जब त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीले नै भन्यो औषधि छैन !
दसैँंमा मासुको सेवनः कस्ता बिरामीको लागि मासु विष बनिदिन्छ ? जानौं
भरतपुर अस्पताललाई देशकै नमूना अस्पताल बनाउँछु : मेसु डा. पौडेल